A new report published by Allied Market Research, titled, “Fitness Equipment Market by Type and User: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2018 – 2025,”projects that the global fitness equipment market is estimated to reach $14,200.8 million by 2025. Asia-Pacific is expected to witn...ဆက်ဖတ်ရန် »
The Boys and Girls Clubs of Dorchester celebrated the openinganew third-floor gym last Wednesday, May 29. The facility was created by Planet Fitness. Shown, front row, l-r: Cordell Givens, 16; Planet Fitness regional manager Lisa Quinlan; Planet Fitness regional manager Paul Zadorian; Sophia Ba...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: မတ်လ-29-2019
- ဒါဟာကြံ့ခိုင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာစျေးကွက်တိုးတက်မှုနှုန်းကားမောင်းသို့မဟုတ်သိမ်းထားသောကွဲပြားခြားနားသောအချက်များပေါ်တွင်တစ်ဦးကိုကြိုတင်စဉ်းစားရှုထောင့်ကိုထောက်ပံ့ပေး - ဒါဟာလိုအပ်သောထုတ်ကုန် segments များနှင့်၎င်းတို့၏အနာဂတ်လက်ခံအတွက်ကူညီပေးသည် - ဒါဟာကွဲပြားပြိုင်ဆိုင်မှုဒိုင်းနမစ်၏ pin ကိုအမှတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကယ်တင်နှင့်ရှေ့ဆက်ကြံ့ခိုင်ရေး Equipment သင်စောင့်ရှောက် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ထုတ်လုပ်သူများကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာစျေးကွက် 2024 Trends ခန့်မှန်းချက်အားသုံးသပ်ခြင်း, နေရာများ, အမျိုးအစားနှင့်လျှောက်လွှာ
အဆိုပါလေ့လာမှုအစီရင်ခံစာမြေမျက်နှာသွင်ပြင်၏အခြေခံပေါ်မှာအောက်ပါဒေသများသို့ bifurcated ဖြစ်ပါတယ်: မြောက်အမေရိက (အမေရိကန်, ကနေဒါနှင့်မက္ကဆီကို), ဥရောပ (ဂျာမနီ, ပြင်သစ်, ဗြိတိန်, ရုရှားနှင့်အီတလီ), Asia-Pacific (တရုတ်, ဂျပန်, ကိုရီးယား, အိန္ဒိယ နှင့်အရှေ့တောင်အာရှ), တောင်အမေရိက (ဘရာဇီး, အာဂျင်တီးနား, ကိုလံဘီယာစသည်တို့ကို), M က ...ဆက်ဖတ်ရန် »
No.18 LanHua လမ်း, BaiHua ရှမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းခရိုင်, စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဧရိယာ, WuYi ကောင်တီ, JinHua မြို့, Zhejiang Provience, တရုတ်
E-mail ကို: info@mpower-group.com
© Copyright - 2010-2019: အားလုံးအခွင့်အရေး။ ကုန်ပစ္စည်းများလမ်းညွှန် - Featured ကုန်ပစ္စည်းများ - ပူ Tags: - Sitemap.xml - amp မိုဘိုင်း
ပြောင်းပြန်လှန်ဇယား, တုန်ခါမှုလေ့ကျင့်ခန်းစက် , သံလိုက်နင်းလေ့ကျင့်ခန်းဆိုင်ကယ်, တုန်ခါမှုပြား , တုန်ခါမှု Belly နှိပ်ခါးပတ် , Abdominal Trainer,